Muran ka aloosan ganaax Mayorka London ka doonayo gaariga Madaxweyne Obama+sawiro – SBC
Muran ka aloosan ganaax Mayorka London ka doonayo gaariga Madaxweyne Obama+sawiro
Booqashadii rasmiga aheyd ee Madaxweynaha Mareykanka Barack Xuseen dObama uu ku yimid wadanka UK gaar ahaan magaalada London ayey ka soo baxayaan sheeko xiiso iyo qosol leh oo la xiriira lacago ganaax ah oo ay ka rabto waaxda gaadiidka & canshuuraha ee magaalada London.
“Barack Obama waa in uu iska bixiyaa qarashka lacageed ee ganaaxa cariiriga wadada (congestion charge) ee gawaaridii amaankiisa qaabilsaneyd oo uu ku jiro gaarigiisa lagu naaneyso The Beast” sidaasi waxaa shaaca ka qaaday duqa magaalada London Boris Johnson.
Mid kasta oo ka mid ah gawaaridii galbinaysay Madaxweyne Obama oo uu ku jiro gaarigiisa gaarka ah ee uu ku socdo ee waxaa lagu ganaaxi doonaa lacag dhaqn 16 doolar, taasi oo ah socodkii ay ku sameeyeen wadooyinka halbowlaha u ah bartamaha magaalada London xiliyada ay xamaasada dhanka gaadiidka ah ay jirto.
“Wadooyinkeenu ma ahan kuwa loo xiray intii uu marayey madaxweynuhu, marka waa in uu bixiyaa qarashka ganaaxa, waana ku faraxsanahay in aan ku dhawaaqo arintan oo ay ku jirto in la ganaaxo gaariga The Beast ee madaxweynaha” ayuu yiri Mr Johnson.
baabuurka Madaxweyne Obama oo lagu naaneyso "The Beast"
Mayor-ka London wuxuu arimahan uga hadlayaa si adag, isagoo Madaxweyne Obama si toos ah ugala hadley arimo la xiriira safaarada Mareykanka ee magaalada London oo diiday inay bixiso lacago ganaax ah oo isku ururay oo gaaraya 8.7 milyan oo doolar, ganaaxaasi oo ah xiliyo kala duwan oo gawaarida safaaradu ay ku soo dhaceen aaga ganaaxa ee bartamaha magaalada London.
Magaalada London gaar ahaan bartamaha ama xudunka magaalada waxay leedahay aag lagu magacaabo congestion zone aagaasi oo baabuurkaa galaa 5 maalmood oo ka mid ah todobaadka oo ah Isniinta ilaa Jimcaha waxaa laga rabaa lacag 16 doolar ah, fikradan oo ah in laga yareeyo saxmada baabuurta aagaasi oo ah meel aad u mashquul badan oo garaarida macla laa’nta inay isaga gasho la diidan yahay.
Safaarada Mareykanka ee magaalada London waxay sheegtey inaanay bixin doonin wax ganaax ama lacagaha jid mariska iyadoo cuskutey xeerarka dhanka diblumaasiyada.
Baabuurka Madaxweyne Obama oo dhex mushaaxaya London
“Halka aynu ka joogno lacagaha congestion charge-ka waa mid salka ku haya heshiiskii dhanka diblumaasiyada ee 1960-kii soo baxay ee loo yaqaan Vienna Convention on Diplomatic Relations, kaasi oo meesha ka saarayey in wax canshuur ah laga qaado hawlaha diblumaasiyada” sidaasi waxaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP afhaayeen u hadashay safaarada Mareykanka ee magaalada London.
Afhayeen u hadley laanta gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegay in Madaxweyne Obama loola dhaqmi doono si la mid ah wadayaasha ama shufeerada magaalada London oo lacago laga doonayo gawaaridooda, waxaana uu sheegay in arinta lacagaha safaarada Mareykanka lagu leeyahay ay ka wada hadleen Duqa magaalada London Borsi Johnson & Madaxweyne Obama lacagtaasi oo gaaraya 5.3 milyan oo Giniga Istarliinka ah.
Laakiin safarkii uu ku yimid sanadkan magaalada London Baadiriga ugu sareeye madhabta Katooliga ee diinta Kirishtaanka Pope Benedict gawaaridiisa wax ganaax lacageed ah laguma soo rogin, waayo gabi ahaanba waxaa la xiray wadooyinka halbowlaha u ah faras magaalaha London, laakiin safarkii Obama wuxuu ka duwanaa kaasi oo wax wado ah loo xiray ma jirin waana taasi mida keentey in ganaax lagu soo rogo gawaaridiisa.